Soo saaraha Golaha Alxanka Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | ZHJ
Waxaan ka soo dejineynaa mashiinka alxanka B-5000 shirkadda Bihler ee ku taal Jarmalka, waxaan u daadi karnaa 200-300pcs daqiiqadii.
Laba geeddi-socod oo aasaasi ah ayaa loo adeegsadaa alxanka xiriirka: qaybaha xiriirka shaqsiyeed waxaa lagu xiraa xariijimo sideyaal ah oo adag ama horay loo shaabadeeyay ama qaybaha xiriirka ee shaabadaysan waxaa laga soo saaray silsilad-dhammeystiran oo leh xirriir horay loogu soo xiray. Inta lagu jiro alxanka qaybaha xiriirka waxa ku qoran wuxuu ku xiran yahay mid ka mid ah astaamaha (cajaladaha), qaybaha siligga ama qaabka caarada. Cabbirka ugu badan ee aagga xidhiidhka ee alxamidda heerka sare leh iyadoo la ilaalinayo dulqaadyada wax soo saar ee dhow waa 5 x 5 mm².
Waxay kuxirantahay arjiga xiriirinta arjiga ee la isticmaalay waxay ku saleysan yihiin dahab, palladium ama qalin. Si looga faa'iideysto habka wax soosaarka ugu kalsoonida badan iyo dhaqaalah qalabka xiriirka badanaa waxay leeyihiin taageero si fudud loo alxamini karo.
Strip uncoiling-strip leveling-Pre feed-Coin and weld-Final feed
Heerka wax soo saarka
Ag 、 AgNi 、 AgCu 、 AgFe ， iwm.
Kala duwanaanta dhexroorka siligga
Xoog isku xidhka
Khadadka alxanka dhaadheer≥Kala xiriir dhexroorka siligga） l Transverse alxanka khadka ≥1 / 2Kilaafka silig dhexroor）
Qaybo shaabadaysan oo leh xariijimo xiriir ah oo dhammeystiran
Qaybaha shaabadaysan ee ka imanaya silsiladda wada-xirnaanta ee dhammeeyey ayaa dhaqaale ahaan laga soo saaray xarig joogto ah. Waxyaabaha lala xiriirayo ee laga soo saaray xarumaheenna wax lagu shiido waxay ku saleysan yihiin dahab, palladium iyo qalin. Daawaha naxaasta iyo naxaasta ah waxaa loo isticmaalaa sida qalabka xambaara salka.
Qaar badan oo ka mid ah codsiyada xiriirka waxay u baahan yihiin lakabyo bir ah oo qaro weyn. Kuwani laguma dabaqi karo substrates dhaqaale ahaan iyada oo la adeegsanayo hababka korantada. Intaa waxaa sii dheer qalabka xiriirka ee leh astaamo gaar ah iyo mid farsamo ayaa badanaa loo baahan yahay. Qalabkan laga soo qaaday alwaax-dahabaal dahab ah ama ku saleysan qalin waxaa sameeya labada dhalaal ee daawaha ah ama macdanta birta. Isku-darka xiriirka iyo walxaha aasaasiga ah waxaa lagu gaaraa hababka xoqidda sida isku-xirnaanta qabow ama xirmooyinka kulul ee isku-xidhka.
Qaybaha Shaambadaysan ee laga helay Astaamaha Toplay
DODUCO waxay soo saartaa bimetals-ka xiriirka oo qaab xariijin ah u sameysa iyadoo la xajinayo xariijimaha flator-ka loo yaqaan 'sideor' si loogu qaado qalabka xamuulka qaada oo ay ku xigto rogid muuqaal ah Kuwani waa aasaaska macaamiisha cayiman qaybaha xiriirka ee leh qaybo bir ah oo qaali ah oo loogu talagalay codsiyada aadka u baahan.
Qaybaha shaabadaysan ee laga tolay shabagyada la tolay
Faa'iidada ugu weyn ee walxaha qallalan ee seam-welded loogu talagalay soo saarista shaambadaha xiriirka waa aagga xaddidan ee aagga alxanka. Tani waxay keeneysaa jilicsanaanta qalabka guga ee adag ee guga oo keliya aagga waxtarka leh ee alxanka. Lakabyada xiriirku waxay ka kooban yihiin inta badan qalabka xiriirka adag ama qaababka xiriir ee isku dhafan ama alxanka.
Hore: Golaha Sharaxid
Xiga: Xiriirinta badhanka alxanka
La Xiriir Golayaasha AC Contactor
La Xidhiidh Golayaasha MCCB